Football Khabar » फेलिक्सले मेस्सीलई ‘तिमी चुप लाग’ भनेपछि ……. (भिडियोसहित)
फेलिक्सले मेस्सीलई ‘तिमी चुप लाग’ भनेपछि ……. (भिडियोसहित)
स्पेनिस सुपर कप फुटबलअन्तर्गत सेमिफाइनलमा एथ्लेटिको मड्रिडसँग ३–२ ले पराजित हुँदै बार्सिलोना प्रतियोगिताबाट आउट भयो । गत राति साउदी अरेबियामा भएको सेमिफाइनल खेलमा बार्सिलोनाले पछि परेको अवस्था उल्टाएर अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा फाइनलको यात्रा एथ्लेकिोलाई सुम्पियो । बार्सिलोनाका २ गोल भिएआरले रद्द गरेको थियो । १ गोलमा ह्यान्ड बल थियो भने १ गोलमा अफसाइड ।
साउदीको किङ अब्दुल्हा स्पोर्ट्स सिटी रंगशालामा भएको सो खेल निकै घम्साघम्सी र तनावपूर्ण भएको थियो । खेलको सुरुआतबाट दुवै टोलीका खेलाडी लगातार फउलमा उत्रिए भने खेलाडीबीच भनाभन र ठेलाठेलका स्थिति पटक–पटक देखिए ।
सोहीक्रमा गोलरहित बराबरीमा सकिएको पहिलो हाफको अन्तिम समयमा एथ्लेटिकोका नयाँ खेलाडी जुआओ फेलिक्स र बार्सिलोनाका जोर्डी अल्बाबीच हात हालाहाल नै भयो । फउलको विषयमा अल्बाले हातको औंलाले फेलिक्सको अनुहार घोचेपछि फेलिक्सले पनि अल्बाको हात आफ्नो अनुहारबाट पन्छाउँदै अल्बालाई धक्का दिएका थिए । पछि बार्सिलोनाका सामुएल उम्टिटी र एथ्लेटिकोका अल्भारो मोराटाले फेलिक्स र अल्बालाई अलग गर्छन् ।
सो सिन सकिएपछि बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी र फेलिक्सको भेट भयो । अल्बासँगको टकरावपछि बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सी फेलिक्स नजिक पुगेर केही भन्न थाल्छन् । फेलिक्स पनि के कम ! उनी मेस्सीसँग भिड्न तयार भएझैं पोजिसनमा खडा हुन्छन् । र, मेस्सीसँग भनाभनमा उत्रिन्छन् ।
स्पेनिस मिडियाले त्यसबेलाको फुटेज संवाद सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार मेस्सीले फेलिक्सलाई ‘तिमीले के भन्यौ ?’ भनेर आक्रोशित हुँदै सोध्छन् । त्यसपछि फेलिक्सले मेस्सीलाई ‘तिमी चुप लाग’ भन्दै जवाफ फर्काउँछन् । त्यहाँ पनि हात हालाहालको स्थिति बनेपछि बार्सिलोनाका पिके र मोराटाले मेस्सी र फेलिक्सलाई अलग गराउँछन् । तब मेस्सी सरासर ड्रेसिङ रुमतर्फ लाग्छन् ।
तर, मेस्सी हिँडेपछि फेलिक्समाथि बार्सिलोनाका लुइस स्वारेज खनिन्छन् । स्वारेज आक्रोशित बनेर फेलिक्समाथि जाइलाग्न खोज्दा एथ्लेटिकोेका अन्य खेलाडीले उनलाई पन्छाउँछन् । स्वारेज पछि हट्दैनन् । उनी अन्य खेलाडीसँग पनि ठेलाठेलमा उत्रिन्छन् । त्यहाँ फेरि फेलिक्स र स्वारेजबीच धकेलाधकेल हुन्छ । मेस्सीसँगको विषयलाई लिएर स्वारेज फेलिक्समाथि आक्रामक रूपमा खनिएपछि फेलिक्सले उनलाई ‘तिमी मुख सम्हाल, तिमी परै बस’ भन्दै गाली गर्छन् ।
दुई टोलीका खेलाडीबीच तनाव बढ्ने अवस्था बनेपछि बार्सिलोनाका पिके आएर फेलिक्सलाई पनि पछि धकेल्छन् भने स्वारेजलाई अलग गराउँछन् । त्यसैबेला रेफ्री आएर बार्सिलोनाका स्वारेज र एथ्लेटिकोका स्टेभन सेभिक दुवैलाई पहेंलो कार्ड दिन्छन् ।
अहिले सामाजिक सन्जालमा समर्थकहरूले मेस्सी र फेलिक्सको तनावलाई लिएर अनेक किस्सा र जोक्स बनाइरहेका छन् । कतिपयले फेलिक्स मेस्सीको तनावलाई ‘नयाँ रोनाल्डो र मेस्सीको भेट’ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । फेलिक्स रियल मड्रिडका पूर्वखेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोकै देश पोर्चुगलका २० वर्षीय खेलाडी हुन् । उनले अस्ति भर्खरै २०१९ मा युरोपको सर्वश्रेष्ठ युवा खेलाडीको ‘गोल्डेन ब्वाई’ अवार्ड जितेका थिए ।
भिडियो हेरौं :
प्रकाशित मिति २५ पुष २०७६, शुक्रबार २०:०४